इमरान खानमाथि मोदीले किन विश्वास गर्न सकेनन्?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रक्षा मामलीका जानकार
बीबीसी। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग दोस्रो पटक वार्तामार्फत विवाद सुल्झाउने पहल गरेको पहिलो पटक होइन। अघिल्लो हप्तामा इस्लामावादले भारतसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको छ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘ पाकिस्तान आफ्ना छिमेकी मुलुकमा शान्तिको नीति अपनाउँछ। दक्षिण एशियामा शान्ति र स्थिरताकालागि काम गर्नु र जम्मू–कश्मिर विवादसहित सबै मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधानकालागि वार्तामार्फत समाधान निकाल्न चाहन्छ।’
मोदी सरकारले अहिलेसम्म यो पत्रको कुनै जवाफ दिएको छैन। यो केही समयको भन्दा भिन्न छ, जब नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो सरकारमा पाकिस्तानसँग खुलेर आफ्नोपन देखाए। उनी विना कुनै तयारी पाकिस्तान गए, तर यो पटक पाकिस्तानका विषयमा कुनै पनि कदम निकै सोच विचार गरेर मात्र उठाउन चाहन्छन्। भारत पाकिस्तानको पत्रको जवाफ दिनमा कुटनीतिक रपमा विनम्र र सही हुन चाहन्छ।
भारतकार्फतबाट नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानलाई निमन्त्रणा नदिनुले भारतले के सन्देश दिएको छ भने उ यो पटक पाकिस्तानलाई धेरै भाउ दिन चाहँदैन।
यसलाई पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद करैशीले अलग रंग दिए। उनले नरेन्द्र मोदीले चुनावी प्रचार पाकिस्तान विरुद्ध बयानबाजीमा आधारित भएका कारण तत्काल उनले इमरान खानलाई आमन्त्रण नगरेको बताए।
तर वास्तविकता के हो भने इमरान खानलाई यसकारण नबोलाइएको हो किनभने भारतले आफ्नो विदेशी नीतिमा केही परिवर्तन गरेको छ।
यो पटक सार्क देशलाई नबोलाएर बिम्सकेट सदस्य राष्ट्रलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। भारतले यस्तो पहिलो पटक गरेको हो किनभने चुनावपछि भारत पाकिस्तानसँग पहिलकै ढर्रामा प्रस्तुत हुँदैन।
भारतका नयाँ विदेशमन्त्री एस जयशंकरले स्पष्ट रुपमा अब सार्क भन्दा बिम्सटेकमा धेरै ध्यान दिने बताइ सकेका छन्। यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले ती दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो, की भारत–पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री कजाकिस्तानमा हुने शंघाई कर्पोरेशन अर्गनाइेजशन समिटका क्रममा भेट हुनसक्छ। विदेश मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै पनि बैठकको तय नभएको बताएको थियो।
भारतले वार्ता र आतंकवाद एकसाथ जान नसक्ने बताउँदै आएको छ। अहिले भारतले यही नीतिको पालना गर्दै गरको देखिन्छ। यद्यपी कुटनीतिक विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुनेछ।
भारतको चिन्ताको विषयलाई पाकिस्तानले सम्वोधन नगरेसम्म भारतले तत्काल आफ्नो नीतिमा कुनै परिवर्तन गरिहाल्दा भन्न हतार हुनेछ। यदि पाकिस्तान विना कुनै एक्शन वार्ता गर्न चाहन्छ र भारतले पनि वार्ता गर्यो भने यो एक प्रकारको गल्ती हुनेछ। भारत फेरि पाकिस्तानको जालमा फस्नेछ।
मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा पाकिस्तानले तीन पटक भारतमाथि आक्रमण गर्यो। २०१६ मा गरिएको सर्सिकल स्ट्राइकपछि भारतले पाकिस्ताप्रतिको नीतिमा परिवर्तन गरेको छ।